BUENAVISTA मा refurbish गर्न सिद्ध घर !!
घरBUENAVISTA मा refurbish गर्न सिद्ध घर !!
लस Lagunetas, BUENAVISTA नोर्ट, Tenerife
धेरै आकार186 m²
बिक्री: धेरै राम्रो घर BUENAVISTA, Tenerife मा refurbish गर्न !!
सिद्ध स्थान 360 डिग्री दृश्य, क्रिस्टल सफा हावा र निरपेक्ष सौहार्द संग प्रकृति घेरिएको। चर्च, क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो रेस्टुरेन्ट र द्वीप को सबै भन्दा सुन्दर पैदल निशान को एक देखि दूर बस केही कदम - मोंटे डेल Agua !!
सम्पत्ति राम्रो संरचनात्मक अवस्था (ठूलो मरम्मत को लागि कुनै आवश्यकता) र एक ग्यारेज र छुट्टै स्वतन्त्र अपार्टमेन्ट मा गरिएका गर्न सकिन्छ कि काठको छत संग प्राकृतिक पत्थर को दुई मूल निर्माण मा मुख्य घर समावेश।
सम्पत्ति ट्याप देखि बिजुली, canalisation र पेय जल छ! यो एक कार संग पहुँच र पार्किङ स्थान वा ग्यारेज संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ।
तपाईं यस जस्तै दोस्रो घर जस्तै एक कम मूल्य लागि पाउनुहुनेछ!
वाइनरी, Villa र घोडा Stables संग विशाल finca
BUENAVISTA नोर्ट, BUENAVISTA नोर्ट
पहिलो installment € 2,50,000 । कुल मूल्य € 975,000
धेरै आकार48000 m²
विशाल घर + finca BUENAVISTA गोल्फ नजिकै!
BUENAVISTA नोर्ट, BUENAVISTA नोर्ट Tenerife
धेरै आकार900 m²
BUENAVISTA गोल्फ नजिकै दृश्यहरु संग ठूलो घर
धेरै आकार221 m²